China ASD4 usoro BIGA iko ji kpachie oghere n'ọtụtụ linear n'ọtụtụ Manufacture na Factory | BiGa
ASD4 usoro BIGA iko ji kpachie oghere n'ọtụtụ linear n'ọtụtụ
Ngwaahịa anyị Linear n'ọtụtụ ji kpachie oghere n'ọtụtụ ebe etinyere igwe, egweri igwe, lathe, EDM na na. Dabere na ndị ahịa, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịnye ngwaahịa dịka grating nke ụdị pụrụ iche na nkọwapụta, yana magnescale, ha abụọ nwere ngwa ndị ọzọ yana akụrụngwa ngwaọrụ pụrụ iche.
Nke a bụ Grating n'ọtụtụ.
Ngwaahịa anyị Linear n'ọtụtụ ji kpachie oghere n'ọtụtụ ebe etinyere igwe, egweri igwe, lathe, EDM na na.
Dabere na ndị ahịa, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịnye ngwaahịa dịka grating nke ụdị pụrụ iche na nkọwapụta, yana magnescale, ha abụọ nwere ngwa ndị ọzọ yana akụrụngwa ngwaọrụ pụrụ iche.
Nkọwapụta Nkọwa Grating:
1, Ogwe osisi: 0.02mm (ụzọ abụọ 50 / mm), 0.04mm (25 ụzọ abụọ / mm)
2, Mkpebi: 0,0005mm, 0.001mm, 0.005mm, 0.01mm
3, Ezi: + -0.003mm, + - 0.005mm, + -0.008mm, + -0.01mm (20 Celsius C 1000mm)
4, Ntughari aka: 1 ref. akara ọ bụla 50mm ma ọ bụ 100mm, anya-nzobe
5, Ogologo ogologo: 50mm ka 1000mm
6, mgbaàmà mmepụta: TTL, HTL, EIA-422-A, 1Vpp, 11uApp
7, Max. ọsọ nke nzaghachi: 30m / min, 60m / min
8, Ọnọdụ okpomọkụ: 0 ruo 45 Celsius
9, Nchekwa okpomọkụ: -40 ka 55 Celsius
Foto dị na Grating
Atụmatụ Linear Scale
A na-ahazi Linear mgbe ejiri ya na counter anyị maka akwụkwọ ntuziaka akụrụngwa akụrụngwa ma ọ bụ akụrụngwa ndị ọzọ nwere mmegharị ahụ, dịka ọmụmaatụ bepụ nkwọ. N'aka nke ọzọ enwere ike iji mmepụta ọnụ ọgụgụ maka nhazi akpaaka njikwa nke akụrụngwa igwe ma ọ bụ ngwaọrụ ndị yiri ya site na CNC ma ọ bụ PLC nkeji. Ihe akpịrịkpa enwere ike ịkwado ya iji dozie mmụba ma ọ bụ nha ọzọ akụrụngwa eji nyocha oke na nyocha. Companylọ ọrụ anyị bụ onye mbu nke ndi okacha amara amara nke oma na China ma na-enye ụdị ngwaahịa dị iche iche. Anyị na-enwe ike ihota na akpịrịkpa pụrụ iche na arịrịọ.
Linear n'ọtụtụ elu
1) Isi ọgụgụ ahụ nakweere bọl na-ebute ọnọdụ ma na-eduzi ya na nnukwu uche na ndụ ogologo.
2) N'ịnabata metrology ji kpachie oghere dị ka atụ datum na elu ziri ezi.
3) N'ịnabata akara Ọdịdị nke nwere pụrụ ịdabere na arụmọrụ & bụ adaba n'ihi na echichi.
4) A na-anabata grating nkenke nkenke nkenke maka Linear Encoder dị ka akara nlele iji hụ oke nkenke.
5) Ihe ndị mmadụ na-eme n'otu n'otu na-eme ka ọ dị mfe iji wụnye, dozie ma mezie Encoder linear.
Nke gara aga: EA-CNC-Standard akpaka image ji atụ ngwá
Osote: (ASD5) BiGa Nkọwa Dị Mkpa Grating Glass Linear Scale 5um Resolution & TTL Signal & measurement length
Digital Linear n'ọtụtụ
Digital Linear n'ọtụtụ N'ihi na Lathe
High ziri ezi Linear n'ọtụtụ
Lathe Linear n'ọtụtụ
Linear n'ọtụtụ Dro
Multi Type Linear n'ọtụtụ
A pụrụ ịdabere na Linear n'ọtụtụ
(ASD5) BiGa High nkenke ji kpachie oghere Glass Linear ...
Ekwe ntuziaka igwe
ASD8 BiGa High nkenke Linear Glass n'ọtụtụ AS ...
Gantry Double-End Mkpa egweri Machine, Gantry Ugboro abụọ Head Mkpa egweri Machine, Gantry Type Mkpa egweri igwe, Gantry Single-End Mkpa-egweri igwe, Gantry Single Head Mkpa egweri Machine, Gantry Mkpa egweri igwe,